“၉၆၉-မူဝါဒ” အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
မွတ်စလင်မ် တိုင်းသိထားသင့်သည့် ၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ဆိုသည်မှာ
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးဖောက်ခွဲပြီး လက်စားချေ တုံန့်ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သဘောထားအမြင်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
အကြမ်းဖက် မီးရှို့ခံရသည့် ဥက္ကံမှ ဒုက္ခသည်များ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
ဆိုင်းတောင်တွင် မွတ်စလင်မ် အိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းများ ဖျက်ဆီးခံရ
ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုကြောင့်မှ ရိုက်မချိုးမိပါစေနဲ
ရခိုင် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ အပေါ် သုံးသပ်ချက် (ဦးအောင်ထူး)
ဒုက္ခသည်များ၏ ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက်သမားများ လုယက်၊ ပနီပင်ရွာ နောက်ဆုံး အခြေအနေ
Eleven Journal ခေတ်သစ် [လူထုမောင်ကာဠု] ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ ဆောင်းပါးမှ
Radio Australia: Malaysia's Polls Close Amid Fraud Claims
တနေ့ အားလုံး သေရမှာခြင်း အတူတူ .. ဘာလို့များ တစ်နိုင်ငံတည်းသားခြင်း သတ်ဖြတ်တာတွေ အားပေး လုပ်ကိုင်နေကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစား မရဘူး
Posted: 05 May 2013 10:53 AM PDT
UMNO has successfully spread the message thatavote for PAS isavote for DAP, which meansaChinese takeover of the government. This way, PAS and PKR are beaten. Money politics, in the absence of free and fair access to media, also playedarole.
Deprivation of opposition party access to mainstream media appears to be the final frontier that Pakatan Rakyat must overcome if they ever dream of taking Putrajaya again. Money politics couldn't work in Penang because there arealot more internet savvy people there. Even then, rural, Malay majority areas like Balik Pulau fell to UMNO in all likelihood because the alternative/social media couldn't penetrate that part of the universe.
It appears that the only way Pakatan can win federal government is if Pakatan can trigger the imagination of the rakyat with regards to unfairness of the media, in the same magnitude as Bersih or even greater.
I feel sad for the generational leaders such as Karpal, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, Nik Aziz and Hadi Awang. They have given their all, tried so hard. By the next elections, they may want to retire. The challenge can only increase for Pakatan to keep its cohesiveness. For one, will the conservative PAS assert itself again, and the call for Hudud get even louder? Or will PAS continue its course and embrace modernisation? I hope they hang on, because more and more young voters will be registered, and the ripples of change favours Pakatan in the long run.
I feel sad for Malaysians, because while it is not evident yet that BN won this elections on the back of electoral fraud, they won inavery dirty contest of money and media - borrowed money, which our next generations will be indebted to repay.And we won't be truly reforming out economy and our education and our national institutions anytime soon.
But the contest is not over yet. If BN only wins by hair's breadth and not 2/3 majority, there is plenty more opportunity to challenge it before the5years is up.
Perhaps one is reminded of the words of Count Dooku to Yoda in Star Wars : Attack of the Clones "It is obvious that this contest cannot be decided by our knowledge of the Force... but by our skills withalightsaber."
I hope Pakatan hasalightsaber. The size of the blade does not matter.
It also calls for new ways for Pakatan to engage the public's imagination, and to take the fight to BN at an even more sophisticated level. It will be insane to try doing the same things that didn't work.
Mr. Stephen Tan Ban Cheng,alawyer practising in Penang, is the author of the following post. I salute Ban Cheng's dedication and stand on integrity and belief in true democracy not forgetting his wonderful writing skills. Thanks for sharing it with me and for allowing me to share it here.
Raped Beyond Recognition by Stephen Tan Ban Cheng
The political innocence of Malaysians has been raped beyond recognition if the presence of organized voters from foreign lands in almost all parliamentary and state wards in this year's election is proven to be true.
Predicated on that very proviso, the evidence for which abounds in the form of photos and videos taken by so many Malaysians in cyber space, the results no longer matter. What matters to each and every Malaysian is that our electoral process has been compromised by the presence of foreigners and attempts to buy votes.
Malaysians had been warned throughout the 15-day campaign before Voting Day on May5that such unhealthy practices would surface. Many decent Malaysians were in truth affronted by Opposition allegations of such low-down practices that would be perpetrated by the Umno-led National Front coalition component parties.
Note: This was written just as the voting booths close at 6pm on May 5, 2013.
Posted: 05 May 2013 07:09 AM PDT
"၉၆၉-မူဝါဒ" အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
by ဒီလူ ပန်းလောင်မြေ (Notes) on Sunday, May 5, 2013
စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒရဲ့ core vale တွေကို မလျော့ကျစေချင်ပါ။ Apr 19 တုန်းက ပို့စ်လေး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။
နေရဲ နဲ့ တကွ ၉၆၉ ကို အားပေးသူများ၊ ဦးဝီရသူကို အထိမခံနိုင်သူများ … အချက်အလက်နှင့်ဆွေးနွေးလိုပါက ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) (၉၆၉)သည် လူသတ်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ လူသတ်ဝါဒကို လက်မခံ အားမပေး၊ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချသည်။
(၂) (၉၆၉)သည် အကြမ်းဖက်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ အကြမ်ဖက်ဝါဒကိုလက်မခံ အားမပေး ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်။
ဤအချက်များအတွက် အငြင်းပွားစရာမရှိပါ။ အကယ်၍ ၉၆၉ ကြောင့် လူသတ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေလျှင် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုသည် မူလ မူဝါဒနှင့် သွေဖည်သွားမည်ပြီး အန္တရာယ်မကင်းသော နောက်ကြောင်းမအေးသော လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်း အငြင်းပွားစရာ မလိုအောင် သေချာသွားပါမည်။
(၃) (၉၆၉)သည် အနိုင်ကျင့်ဝါဒ မဟုတ်သလို၊ အနိုင်ကျင့်ဝါဒကို လက်မခံ အားမပေး၊ ကန့်ကွက် ရှုတ်ချသည်။
အမျိုးသားအမည်ခံပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားသော စီးပွားရေးခေါင်းစဉ်တပ်၍ အင်အားအများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းသာ အိမ်မြေရောင်းချ၊ ရောင်းဝယ်၊ အလုပ်ပေး ငှားရမ်းခြင်းသည် အနည်းစုအခြားဘာသာဝင်များအား အနိုင်ကျင့်သည့်မူဝါဒ မဟုတ်ပါဟု ငြင်းဆန်ရန်ခက်ခဲမည်။ "၉၆၉-လုပ်ငန်းစဉ်"သည် "၉၆၉-မူဝါဒ" ရှေ့နောက်လျော်ညီခြင်းမရှိ။
(၄) (၉၆၉)သည် လူ့အသက်မပြောနှင့် တိရစ္ဆာန်အသေးအမွှားလေးများ၏ အသက်ကိုပင် တန်ဖိုးထားလေးစားသည်။ ကြင်နာသနားသည်။ စာနာမှုအပြည့်ရှိသည်။ (၉၆၉)၏ အဆုံးအမလာ ကံငါးပါးလုံခြုံရေးတွင် ပါဏာတိပါတကံ (သူ့အသက်မသတ်ရ ပညတ်ချက်) ပါဝင်သည်။(၅) (၉၆၉)သည် သွေးစွန်းခြင်း၊ သွေးဆာခြင်း၊ သွေးတောင်းခြင်းကို မလိုလားသလို သွေးစွန်းသော လက်နှင့် သွေးဆာသွေးတောင်းသူများကိုလည်း မေတ္တာရေဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြော ဆုံးမမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။
(၆) (၉၆၉)သည် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးကို လိုလားပြီး၊ ထိုသို့ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို အခွင့်သင့်တိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလေ့ရှိသည်။
အင်အားအများစု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းသာ အိမ်မြေရောင်းချ၊ ရောင်းဝယ်၊ အလုပ်ပေး ငှားရမ်းခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသူဦးရေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသားဦးရေ အိမ်ခြေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေ မလျော့ပါးရေး.. ဆိုသော အချက်များသည် သာသနာရေးနှင့် လူမျိုးရေး ရောထွေးပစ်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသည်လည်းကောင်း လက်တွေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးဖန်တီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပဲ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တင်းအားပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် "၉၆၉-လုပ်ငန်းစဉ်"သည် "၉၆၉-မူဝါဒ" ရှေ့နောက်လျော်ညီခြင်းမရှိ။
(၇) (၉၆၉)သည် နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှု၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများဖြစ်ပွားအောင် လှုံဆော်ခြင်း အလျဉ်းမရှိသလို၊ ငါနှင့်မတူ ငါ့ရန်သူ မူဝါဒကိုလည်း ကျင့်သုံးလေ့မရှိသည့်အပြင်၊ မိမိဘာသာ သာသနာမှတစ်ပါး အခြားသော ဘာသာ သာသနာကို ထိပါးပုတ်ခတ်ခြင်း၊ ကျူးကျော်စော်ကားခြင်း၊ ရန်လိုရန်မူခြင်းလည်း လုံးဝမရှိပေ။
လက်တွေ့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွင် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၇)အား အပြည့်အ၀ ကျူးလွန်စေသည့် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့် ၉၆၉၏ မူဝါဒနှင့် လမ်းစဉ်သည် ရှေ့နောက်လျော်ညီခြင်းမရှိ။
(၈) (၉၆၉)သည် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ရာနှုန်းပြည့်ကျင့်သုံးပြီး၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်နေသူများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချလေ့ရှိသည်။
လက်တွေ့ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုအရ ၉၆၉ လှုပ်ရှားသူများကိုယ်တိုင် မိမိကိုယ်မိမိ ပြင်းထန်စွာ ရှုတ်ချရတော့မလို ဖြစ်နေပေသည်။
(၉) (၉၆၉)သည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝပေးထားပြီး၊ အမျိုးသမီးများကို ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် ကန့်သတ်တားမြစ်မှုများကိုလည်း ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်လေ့ရှိသည်။
ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ စောဒကတက်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသမီးမျာ ဘုရားဆုပန်ခွင့် မရှိခြင်း၊ အချို့သော ဘာသာရေးအထွဋ်အမြတ်နေရာများသို့ အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်ခွင့် မရှိခြင်းစသည့်အချက်များနှင့်တော့ ကိုက်ညီခြင်း မရှိပါ။
(၁၀) (၉၆၉)သည် (၂၄)ရာစုမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရေး အိပ်မက်ရှည်ကြီး မက်လေ့မရှိသလို ကေသမုတ္တိသုတ္တန် (ကာလာမသုတ္တန်)လာ ဘာသာတရားတစ်ခုကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှ လက်ခံထိုက်သည့် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို အမြဲတစေလေးစားဆောက်ရွက်သည်။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှ လက်ခံထိုက်သည့် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို ၉၆၉၏ ပြဌာန်းချက်များကဖြင့် ပြန်လည် ဖောက်ဖျက်နေသည်။
(၁၁)(၉၆၉)သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အစဉ်အမြဲ လိုလားပြီး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားခြင်း၊ လူမျိုးဘာသာခွဲခြားခြင်း၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်းမျိုးကို လူသားမဆန်မှုဟု ရှုမြင်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းသာ အိမ်မြေရောင်းချ၊ ရောင်းဝယ်၊ အလုပ်ပေး ငှားရမ်းခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသူဦးရေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသားဦးရေ အိမ်ခြေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေ မလျော့ပါးရေး.. ဆိုသော အချက်များသည် သာသနာရေးနှင့် လူမျိုးရေး ရောထွေးပစ်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသည်လည်းကောင်း အထက်ဖော်ပြပါ အချက်(၁၁)နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ၉၆၉၏ မူဝါဒနှင့် လမ်းစဉ်သည် ရှေ့နောက်လျော်ညီခြင်းမရှိ။
(၁၂) (၉၆၉)သည် ဘာသာလူမျိုးကွဲပြားသူများနှင့် ပြဿနာဖြစ်လျှင် အမျိုးသားရေး ပြဿနာအဆင့်သို့ မရောက်စေရန် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ထိရောက်စွာ အရေးယူမှုကို လိုလားပြီး အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို လုံးဝမလိုလားပေ။
အချက်(၁)နှင့်(၂)ကို သုံးသပ်ထားသည့် အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
(အကယ်၍ ၉၆၉ ကြောင့် လူသတ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေလျှင် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုသည် မူလ မူဝါဒနှင့် သွေဖည်သွားမည်ပြီး အန္တရာယ်မကင်းသော နောက်ကြောင်းမအေးသော လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ကြောင်း အငြင်းပွားစရာ မလိုအောင် သေချာသွားပါမည်။)
(၁၃) (၉၆၉)သည် အတ္တကို ဗဟိုပြုသည့် မူဝါဒကို မကျင့်သုံးသလို အနတ္တကို ယုံကြည်ရေးကိုသာ အလေးထားသည်။
ယုတ်လတ်မြတ်မရွေး ဟူသော ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၏ အခြေခံအချက်ကို ကျော်လွန်သည့် ပြဌာန်းချက်များသည်
၉၆၉ လမ်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းသာ အိမ်မြေရောင်းချ၊ ရောင်းဝယ်၊ အလုပ်ပေး ငှားရမ်းခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသူဦးရေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသားဦးရေ အိမ်ခြေ မလျော့ပါးရေး၊ တိုင်းရင်းသား နယ်မြေ မလျော့ပါးရေး.. ဆိုသော အချက်များသည် သာသနာရေးနှင့် လူမျိုးရေး ရောထွေးပစ်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များသည်လည်းကောင်း အတ္တကို ဗဟိုပြုသည်မှာ ထင်ရှားသောကြောင့် အနတ္တသဘောမှ သွေဖည်ခွဲခွါသော မူဝါဒဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့အနတ္တသဘောမှ သွေဖည်ခွဲခွါသော မူဝါဒ ဖြစ်လာသည့် တပြိုင်နက် ၉၆၉ မူဝါဒသည် အယူလွဲမှားသော အတ္တဒိဋ္ဌိဝါဒ ဖြစ်လာပေမည်။ ယင်းသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ စစ်စစ် မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။
ဒီနေရာလေးမှာ – မုံရွာ ရွှေစည်းခုံ စေတီ၊ (၁၁)ည ဓမ္မသဘင်ရဲ့ တတိယညမှာ ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်အာစာရ၏ တရားတော်ထဲ ကောက်ချက်လေးကို ချပြရင်း အထက်က ၉၆၉ မူဝါဒကို ယှဉ်တွဲ မြင်မိစေလိုပါတယ်။
"မြတ်စွာဘုရားက အနတ္တလို့ ဟောပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတောင် အတ္တကင်းဖို့ မလွယ်လှဘူး။ ဇီဝအတ္တဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ သိမှတ်နိုင်ပေမယ့် လောကီစီးပွားအတွက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ငါ့အတွက်၊ ငါ့အမျိုးအတွက်၊ ငါ့နိုင်ငံအတွက်၊ ငါ့သာသနာအတွက် ဆိုတာလိုမျိုး အတ္တနဲ့ တွန်းတင်ပေးရသေးတယ်။ အတ္တဒိဋ္ဌိက သောတာပန် အရိယာဖြစ်မှ ကင်းစင်တာကိုး။ အရိယာ မဖြစ်သေးလို့ အတ္တမစင်သေးပေမယ့် ကိုယ့်အတ္တနဲ့ကိုယ် လောကီစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာ သူတစ်ပါးကို မထိပါးရင် တော်လှပါပြီ။
သာသနာမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ သံဃာ့လောကမှာကိုပဲ အတ္တမကင်းနိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စ တော်ရုံတန်ရုံဆို တော်သေးတယ်။ မတော်မတရား အဆင့်ထိ ရောက်လာရင် ရှက်ဖို့တောင် ကောင်းတယ်။
အနတ္တ အနတ္တလို့ အာဘောင်အာရင်း သန်သန်နဲ့ ဟောလေ့ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာ့လောကမှာ အလားတူ အတ္တဆန်တာတွေ တွေ့တွေ့နေရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ အောက်တန်းကျတဲ့ အတ္တအပြုအမူတွေ ဒီနေ့ခေတ်၊ ဒီနိုင်ငံမှာတောင် ရှိနေသေးတယ်။"
- ဒါဟာ ဒေါက်တာ အရှင်အာစာရ မုံရွာ ရွှေစည်းခုံ စေတီမှာ ဟောခဲ့တာပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင် ၉၆၉ ရဲ့ မူဝါဒနဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ ရှေ့နောက်မလျော်ညီဖြစ်နေပြီး၊ တဖြည်းဖြည်း အတ္တဒိဋ္ဌိဝါဒ ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ … ၉၆၉ မူဝါဒဟာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒလို့ သတ်မှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၉၆၉ မူဝါဒဟာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို ဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ငြင်းဆန်ဆွေးနွေးလိုသူများ အချက်အလက်ဖြင့်သာ ဆွေးနွေးပါရန် -
- လေးစားစွာဖြင့် – ဒီလူ (ပန်းလောင်မြေ)
Posted: 05 May 2013 06:39 AM PDT
01 May 2013 Robert Elhose
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ် အားလုံးအတွက် သေရေး ရှင်ရေးတမျှ အရေးကြီးနေ တဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ ဆိုတာကို ပညာရပ် ဆိုင်ရာ စကားလုံးများ မပါပဲ လူတိုင်း နားလည် နိုင်အောင် တတ်နိုင် သလောက်ပြောကြည့်ပါမယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် တကယ့် နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှုကြီးပါ။
ပထမ ဦးစွာ ဒီညစ်ပတ်တဲ့ ဥပဒေကြီး ဘယ်လိုကဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာပါ။ ဒီဥပဒေရဲ့ အဓိက ပိသုကာကတော့ အာဏာရှင်ကြီးဟောင်း ဦးနေ၀င်း၊ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးဇနီး ရခိုင်လူမျိူး ဒေါ်နီနီမြင့်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ကမှ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်မြို့မှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့တဲ့ အစွန်းရောက် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေးဝါဒီ၊ ရခိုင်လူမျိူး သမိုင်း ပါမောက္ခဟောင်း ဒေါက်တာအေးကျော်နဲ့ အဲ့ဒီအချိန်က သူ့လက်ရင်း တပည့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ယခု ဂျပန်နိုင်ငံ ကန်တတက္ကသိုလ် မှာ အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ သမိုင်းပါမောက္ခ လုပ်နေသူ ဒေါက်တာအေးချမ်း ဆိုသူတွေဟာ အဓိက လက်သည်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီ အချိန်က တိုင်းပြည်ရဲ့ အလုံးစုံအာဏာ ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အာဏာရှင်ကြီး ဦးနေ၀င်းကို သူ့ဇနီး ဒေါ်နီနီမြင့် မှ တစ်ဆင့် မွတ်စလင်မ် မုန်းတီးရေးဝါဒီ ခိုင်လူမျိူးများရဲ့ ထိုးဖောက် အကွက်ဆင်မှု များထဲက တစ်ခုဆိုတာ မှန်းဆ နိုင်ကြမှာပါ။
သုံးလေးနှစ်လောက် အချိန်ယူပြီး မွတ်စလင်မ်များကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီဥပဒေဟာရေပက်မ၀င် လောက်အောင်ကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ဘယ်လို လည်မြိုညှစ်ထားတယ် ဆိုတာကို နားလည်သလောက် တင်ပြနိုင်အောင် အားထုတ်ကြည့်ပါမယ်။
ဒီဥပဒေ အရ ဆိုရင်
၁။ နိုင်ငံသားဆိုရာမှာ တိုင်းရင်းသား နဲ့ ပြုနိုင်ငံသား (ဟိုတုန်းကတော့ ဧည့်နိုင်ငံသားလို့သုံးပါတယ်) ဆိုပြီး နှစ်မျိူးခွဲ လိုက်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ဆိုရာမှာ အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာပထမစစ်ပွဲ (၁၈၂၃) မတိုင်မီ မြန်မာ နိုင်ငံထဲမှာ နေထိုင် လာခဲ့သူတွေ လို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ဒီ့ နောက်ပိုင်း မှ ရောက်လာတယ် လို့ သူတို့က သက်သေ ပြမယ့် သူတွေကတော့ တိုင်းရင်းသား အဆက်အနွယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ ရှင်းပါတယ်။
၂။ နောက်တစ်ခုက လွပ်လပ်ရေး မရခင် အရင် ၈ နှစ် ( ၁၉၄၀ ခုနှစ်၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့) နောက်ပိုင်း တိုင်းပြည် တွင်း တစ်ဆက်တစ်စပ် တည်း နေထိုင်လာ သူ ဘိုးဘွားများက ပေါက်ဖွား လာသူ များ က သူတို့ပြောတဲ့ ပြုနိုင်ငံသား(ဧည့် နိုင်ငံသား) အဖြစ် လျှောက်ထားနိုင်တယ် လို့ဆိုထားပါတယ်။ သူတို့က စဉ်းစားပြီး ခွင့်ပြု ရင်တောင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ် က ဧည့်နိုင်ငံသား ပဲ ဖြစ်မှာနော်။ နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဘူး။ အဲ … အဲ့ဒီ ဧည့်နိုင်ငံသားက မွေးတဲ့ တတိယမျိူးဆက်၊ မြေးအဆင့် ကမှ အထောက်အထား အပြည့်အစုံနဲ့ လျှောက်ထားပါမှ နိုင်ငံသား အဖြစ် စဉ်းစားပေးမယ်တဲ့။
၃။ အဲ့ဒီလို နဲ့မှ တင်းပြည့် နိုင်ငံသား ဖြစ်လာရင်တောင် တိုင်းရင်းသား မိဘက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပထမတန်းစား နိုင်ငံသား မဟုတ်ခြင်းကြောင့် ဤသူများအား နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်ဟု ယူဆချိန်တွင် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အချိန်မရွေး ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်လို့ ပါရှိပါတယ်။
ဒီသုံးချက်ကို အခြေခံ ပြီး လူတိုင်း နားလည်အောင် အကျယ် ထပ်ရှင်းပါမယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၈၂၃ ခု အရင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်ခဲ့ကြသူ မွတ်စလင်မ်တွေ အကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောရမယ် ဆိုရင် အခုအငြင်းပွားနေ တဲ့ ရိုဟင်ဂျာကစပြီး ရခိုင်ပြည်တွင်း ဆို ကမန်၊ မဟာမေဒင် တွေနဲ့ ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ လက်ရှိမြန်မာပြည် အရပ်ရပ် မှာဆို ပသီ၊ မြေဒူး၊ ပန်းသေး၊ ပသျှူး စတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ တွေ ဆိုတာ အမှန်တကယ် ရှိခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်း ကျမ်းအစောင်စောင်မှာ မွှေနှောက် ရှာဖွေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြာင်း အကျယ်မရှင်းလိုပါ။
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်ခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်မ် လူမျိူးစုတွေဟာ သူ တိုပြောနေသလို ၁၈၂၃ ဟိုမှာဖက်ကတည်းက ဒီနယ်မြေထဲမှာ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ကျိူးကြောင်း ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားနဲ့ တကွ တင်ပြ နိုင်ရင် ဒါ တိုင်းရင်းသားပဲပေါ့။ ၈၂ ဥပဒေ အရကို နိုင်ငံသားသာမဟုတ် ၊ တိုင်းရင်းသားပါ ဖြစ်နေပါပြီဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။
ခရစ်နှစ် ၁၇၉၉ ခုနှစ် က ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဖရန်စစ် ဘူခါနန် ရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ မဟာမေဒင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော ရိုဟန်းဂျာ လူမျိူးဆိုတာ ရခိုင်ဒေသမှာ အုံလိုက်ကျင်းလိုက်နေထိုင်ခဲ့ဘူးကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား ဟာ ပထမတန်း စား Primary Source အထောက်အထား ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းပညာရှင်အားလုံးက လက်ခံထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စ မကြာခင်ကပဲ ကိုဌေးလွင်ဦး နဲ့ ရခိုင်သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာအေးချမ်းတို့ အကြား ငြင်းအခုံ ဖြစ်ခဲ့ကြတာအားလုံးအသိပါ။
အချက်အလက်နဲ့ ငြင်းခုံဖို့ရာ မစွမ်းသာတော့တဲ့ အခါ ဒေါက်တာ အေးချမ်းက ဒီ ရိုဟန်းဂျာ ဆိုတာ သူတို့ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေကို ပြောတာဖြစ်ကြောင်း မခိုင်မလုံ ရယ်မောဘွယ်ရာငြင်းခုံ သွားတာကိုလည်း မှတ်သား လိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုဌေးလွင်ဦး ကိုလည်း သူနဲ့ တန်းမတူ သူမို့ Debate မလုပ်နိုင်သလိုလို အပြောအဆိုမျိူးကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကိုဌေးလွင်ဦးက သူနဲ့ တန်းမညီ လို့ မဆွေးနွေး နိုင်ဘူးလို့ ဆိုရင် သူနဲ့ တန်းညီရုံမက ကမ္ဘာ့အဆင့်မှာ သူ့နဲ့ တန်းပိုမြင့် နေသူ Dr Abib Bahar က သူ့ကို ဒီ Issue ကိုပဲ တီဗီချယ်နယ်လ် တွေ ရှေ့ ဆွေးနွေး ကြရအောင်လို့ ကမ်းလှမ်းထားတာကို နှစ်နှစ် နီးပါး သူ နှာစေး နေတာကလည်း ကလေးဆန်လှပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ မှာ ဒီလို ခိုင်လုံတဲ့ စာအုပ်စာတမ်း အထောက်အထား တွေအပြင် ရှေးဟောင်း ကျောက်စာတွေ၊ ဒင်္ဂါးတွေ၊ ရှေးဟောင်း မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေ အမြောက်အများ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဒီနေရမှာ အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ နေ့စွဲ အရင် နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့ငါးဆယ်၊ တစ်ရာ့ခြောက်ဆယ် လောက် အပြင်ဖက်မှာ နေထိုင်လာသူတွေကိုပဲ နိုင်ငံသားစစ်စစ် ပေးပါတယ် ဆိုတာမျိူး မတွေ့ဘူးပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင် လည်း ကျွန်တော့် ကိုထောက်ပြပေးပါ။ ဒါဟာ ရယ်ဘွယ်သက်သက်ပါ။
ပြီးရင်ရော ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်၊ သူတို့ ၊ ဘယ်သူမဆို အဲ့ဒီ နှစ် နှစ်ရာနီးပါးက ဘိုးဘွားများ ဒီမှာ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အထောက်အထား ကို တကယ်တမ်း ပြသနိုင်မယ့်သူ ရှိပါသလား။ ရှိမယ်ဆိုရင် လက်ရှိသမ္မတကြီး အပါအ၀င် မည်သူမဆို ပြသနိုင်ပါသလား။
ဒါကျွန်တော့် မေးခွန်းပါ။ နောက်တစ်ခါ သူတို့က မွတ်စလင်မ် ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး၊ တိုင်းရင်းသား ဆိုရင် မွတ်စလင်မ် မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ အတင်းရော အဓမ္မရော လုပ်ထားတဲ့ မူကလည်း ရှိထားတာ အားလုံးအသိပါ။
ကျွန်တော်အထက်က တင်ပြထားတဲ့ နံပါတ်နှစ်အချက်မှာ ပါသလို လွတ်လပ်ရေးမရခင် အနည်းဆုံး ရှစ်နှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း နေထိုင်လာခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ပြသနိုင်သူ ဘိုးဘွားများရဲ့ မြေးအဆင့်ကို (ပြု) နိုင်ငံသား လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း ဆိုထားတယ်၊ လျှောက်ထားနိုင်တာနော်။ သူတို့က ပေးမှ ခင်ဗျားရမှာ။ ရရင်တောင် ခင်ဗျားက နိုင်ငံသားစစ်စစ် မဖြစ်ပြန်သေးဘူးတဲ့။ ခင်ဗျားရဲ့ မြေးလက်ထက် ကျမှ ဒီအထောက်အထားတွေ အားလုံး နှစ်ဖက် မိဘ များရဲ့ ဘိုးဘေး အစဉ်အဆက် အထောက်အထားတွေ ခင်ဗျား စုံစုံလင်လင် ထုတ်ပြ နိုင်မှ ခင်ဗျားမြေးကို နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း သူတို့က စဉ်းစားပေးမယ်။ စဉ်းစားမေးမှာ။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော် အထောက်အထားမဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ရပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ အမေရိကန် အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေ ဖြစ်တဲ့ ဗွီအိုအေ တို့ အာရ်အက်ဖ်အေ တို့နဲ့ အင်တာဗျူးများမှာ အတိအကျ ကို ပြောဆိုသွားခဲ့တာတွေပါ။
ကဲ အဲ့ဒီ (ပြု) နိုင်ငံသား နဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ရာကြား အဆင့်ဆင့်တွေ အတွက် ခင်ဗျား ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ။ ပြန်တွက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး မျိူးးဆက် ခြောက်ဆက်။ ဒါနေရာတိုင်းမှာ ခင်ဗျား သိပ်ကံကောင်းလွန်းပြီး အဆင်ပြေပြေ ဖြစ်ခဲ့မှသာ။ ကံမကောင်းရင် မျိူးဆက် ခုနစ်ဆက် ရှစ်ဆက်လောက်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါနော် ခင်ဗျားတို့ ဆွေမျိူးခုနစ်ဆက်တွေ သိပ် အမှတ်အသားကောင်းပြီး မှတ်ပုံတင် အထောက်အထား အားလုံးအဆင့်ဆင့်ကို ပြသနိုင်မှ ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေ။ အဲ့လို ဆွေခုနစ်ဆက် မျိူးခုနစ်ဆက် အထောက်အထား တွေပြသနိုင်မယ့် သူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိပါသလား။ ရှိရင် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးတို့ လူဝင်မှုဝန်ကြီးဦးခင်ရီ တို့ပဲ အရင်ပြပါ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တာတွေ နဲ့ လူတွေကို ချောက်တွန်းနေတာပါ။
ကျွန်တော့် ကိုယ်ပိုင် ဥပမာ လေး တစ်ခုပဲ ပြောပြပါရစေ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက အသက် ၁၂ နှစ်ပြည့် မှတ်ပုံတင် လုပ်ရတဲ့အခါ သုံးခေါက်ချိူး၊ ယောက်ျားလေး ဖြစ်လို့ အစိမ်းရောင် နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကဒ် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ တုန်းက လူမျိူး နဲ့ နိုင်ငံသား နေရာတွေမှာ မြန်မာ လို့ ရေးသားထားပြီး၊ ဘာသာ နေရာမှာ အစ္စလာမ် လို့ ရေးထားပါတယ်။ နောက် ၁၉၉၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ကမှ စခဲ့တဲ့ အခု ပန်းရောင် (နိုင်) နိုင်ငံသားကဒ်တွေလည်း ပေါ်လာရော ကျွန်တော်ရော ၊ကျွန်တော့်မိဘများ သဘောရောမပါပဲ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဖြစ်လို့ဆိုပြီး လူမျိူးနေရာမှာ အိန္ဒိယ/ဗမာ လို့ရေးပြီး ဘာသာနေရာမှာ အစ္စလာမ် ဆိုပြီး အတင်းရော အဓမ္မ ရော ရေးသဗျ။ ကျွန်တော့်မိဘများက အကြောက်အကန် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြရှာပါသော်လည်း အလိုမတူ ပဲ အတင်းရော အဓမ္မရော ပြုကျင့်ခြင်းခံလိုက် ရသလို ဒီလိုမှ မရေးရင် နိုင်ကဒ် ဘယ်တော့မှ မထုတ်ပေးနိုင်ဘူး။ ဒါ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူ စတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့ နိုင်ငံသားကဒ် ရသွားခဲ့တာပါ။ အစစ် အနေနဲ့ မွေးရာပါ ဗမာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ စင်စစ် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် မိခင်တောင် အခု အစ္စလာမ် ကိုးကွယ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ပုဒ်မ နဲ့ လူမျိူးနေရာမှာ အိန္ဒိယ/ဗမာ ဆိုပြီး အရေးခံလိုက်ရတာ ခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်။ ကျွန်တော့် အမေကတော့ ခွက်ထ်ိုးခွက်လှန် ရယ်လို့ပေါ့လေ။ ထားပါတော့။
ကဲထားပါဦး။ အဲ့ဒီထောင်ချောက်အားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ပန်းရောင် (နိုင်) ကဒ် ကို ခင်ဗျား အခု ကိုင်ထား နိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် ခင်ဗျားက ပင်ရင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူ တိုင်းရင်းသားထဲက မဟုတ်လို့ဆိုပြီး ဒီလို Natuaralized နိုင်ငံသား တွေကို နိုင်ငံတော်က လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက အချိန် မရွေး နိုင်ငံသား ဖြစ်ခြင်းမှ နုတ်သိမ်းပယ်ဖျက် နိုင်သည် လို့ဆိုထားပြန်တော့။ ခင်ဗျား သားမြေးတွေ အတွက် တော့ ပန်းရောင် ကိုင်ကိုင် ၊ ဘာကိုင်ကိုင် ဘာအာမခံချက်မှ မရှိတော့ဘူး ကိုယ့်ဆရာရေ။
ဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံး ပန်းရောင်ကဒ် ကိုင်ထားသူတွေကို ပြောတာနော်။ အခုနောက်ပိုင်း သွေးနှော သံသယ၊ နိုင်ငံသား သံသယ ဆိုပြီး ထုတ်ပေးထားတဲ့ သုံးခေါက်ချိူးကဒ် တို့ အဖြူရောင် ကဒ် တို့ ဆိုတာကတော့ ဆောရီးပဲ ကိုယ့်ဆရာ။ မသိနားမလည်ရှာလို့ ဟိုးတုန်းက ဘိုးဘေးများ ရဲ့ အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းတွေ သ်ိမ်းမထားနိုင်ကြရှာတဲ့ ၊ မပြသ နိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်မ် အများစုကတော့ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်က တိုက်ရိုက်ဆင်းသက် လာသူဖြစ်ပေ့စေ၊ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် နန်းတွင်း မြန်မာစာဆိုတော်ကြီး ဦးနု ကနေ တိုက် ရိုက်ပဲ ဆင်းသက်လာလာ သူတို့ဥပဒေ အရဆိုရင် တော့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ အရေး ဝေရာမဏိ ၊ ဝေးဝေး ကသာဖြစ်ကြောင်း အကျိူးမြှော် နှိုးဆော် လိုက်ရပါကြောင်း။
Posted: 05 May 2013 06:14 AM PDT
ခင်ဗျားတို့ ခံစားဖူးသလား (M-Media Blog ကဏ္ဍ- ကဗျာ)
မေ-၄၊၂၀၁၃ ရေးသူ-Ree Na
Photo from- ကင်မရာနောက်ကလူ FB
တသက်လုံး ရှာထားသမျှတွေ မီးလောင်ပြင်မှာ လောင်ကျွမ်းနေတာကို မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့ ခံစားချက်ကို
လင်သေ သားသေ တဲ့ မပဋာတွေရဲ့ မြေလူးရတဲ့ အဖြစ်မျိုးကို
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားနေရာကနေ သူများလာကျွေးမယ့် ထမင်းထုပ်ကို စောင့်မျှော်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို
ဒီမှာမွေး ဒီမှာကြီးပြီး ဒီနိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်နေရင်းကနေ မင်းတို့ဟာ ဧည့်သည်ပါလို့ အပြောခံရတဲ့ အဖြစ်ကို
ယုံကြည်သက်ဝင်မှုတွေရဲ့ အထွဋ်အမြတ်တွေကို ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါ ရင်ဘတ်တွေ အောင့်လာတဲ့ထိ ၀မ်းနည်းရတဲ့ သက်ဝင်သူတွေရဲ့ အဖြစ်ကို
ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်သွားမှန်း မသိလိုက်ခင်မှာ ရုပ် နဲ့ နာမ် တွဲရက်မရှိတော့ရတဲ့ အဖြစ်တွေကို …။
သူငယ်တန်းဘ၀ကနေ အလုပ်ခွင်ထဲ ၀င်တဲ့အထိ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော် အများနဲ့မတူသလို ခွဲခြားခံရတဲ့ အဖြစ်တွေကို
သားကို စိတ်မပူပါနဲ့ လို့ ပြောပြီး သေသွားတဲ့ ကလေးလေးအတွက် ဖြေဆည်ရာမရတဲ့ ကလေးအမေရဲ့ အဖြစ်ကို
ဘာအပြစ်မှ မရှိပါပဲ လက်နှစ်ဖက် ခေါင်းပေါ်တင်လို့ မျက်နှာအောက်ချပြီး ခေါင်းငုံ့ကာ ကိုယ့်မြို့ကနေကိုယ် ထွက်ခွာနေတာတောင်မှ ဆဲဆိုပြီး ခဲနဲ့ လှမ်းပစ်ခံရတဲ့ အဖြစ်တွေကို
တခုလောက်ပဲ လူပီပီသသ ၀င်ခံစားကြည့် … ခင်ဗျားတို့ ရေးနေတဲ့ သတ်ပစ်ကွာ ချပလိုက် ဆိုတဲ့ အကုန် မီးရှို့ပစ်ရမှာဆိုတဲ့ စာလုံးတွေအတွက် ရှက်တတ်လာလိမ့်မယ်။
Posted: 05 May 2013 06:03 AM PDT
မေ-၄၊ ၂၀၁၃ M-Media KK
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မီးရှို့သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်များက အင်ဒိုနီးရှားမှ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးဖောက်ခွဲပြီး လက်စားချေတုံန့်ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားအမြင်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ အဖွဲ့ကြီးကိုယ်စား ဟာဂျီဦးမြင့်ထွန်းမှ ဖြေကြားပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Q – အင်ဒိုနီးရှားမှာ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးဖောက်ခွဲပြီး လက်စားချေ တုံန့်ပြန်မည်ဆိုသည့်အပေါ် အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များအနေနှင့် ဘယ်လို သဘောထားအမြင်များရှိပါသလဲ။
ှA – အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်မ် အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို ဘယ်သူက ကျူးလွန် ကျူးလွန်၊ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲ ကျူးလွန် ကျူးလွန် အပြစ်မဲ့သူတွေ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးတာကို ကျွန်တော်တုိ့ လက်မခံပါဘူး။ ဒါ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ သဘောထားပဲ။ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သူက၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် မှန်သမျှ ပျက်စီးအောင် ကျူးလွန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှကို ကျွန်တော်တို့ ဆန့်ကျင်တယ်၊ လက်မခံပါဘူး။
Q – ဟုတ်ကဲ့ ဒါက အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာ လက်မခံဘူးဆိုတာပေါ့။ ဒါဆို လက်ရှိအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကို ချုပ်ငြိမ်းအောင် အဓိကလုပ်ရမယ့်ကိစ္စက ဘာလုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။
A – အကြမ်းဖက်မှုကို ချုပ်ငြိမ်းအောင် လုပ်ဖို့ အဓိကကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတဲ့အခါကျရင် လူတွေက တရားဥပဒေကို ယုံကြည်မှုအားနည်းလာပြီး မိမိစိတ်ထင်ရာကို ဆောင်ရွက်တတ်တယ်။ အဲလို စိတ်ထင်ရာဆောင်ရွက်တဲ့အခါကျ တရားမျှတမှုကို တစ်ခါ ကင်းကွာသွားစေတာပေါ့။
အဲဒါကြောင့်လည်း အခု မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် မြန်မာမွတ်စလင်မ်အဖွဲ့အစည်းတွေက အစိုးရကို မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားနေတာ။
Q – ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်လို ပန်ကြားမှုများ လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။
A – ဒီကိစ္စက ဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွှယ်ပြီးတော့ နှီးနွှယ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ သဟဇာတရှိခဲ့တဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကောင်းရှိခဲ့တယ်။ ဒီ အစဉ်အလာကောင်းကို ကြာရင် ထိခိုက်လာနိုင်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ချက်ချင်း အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အတွက် မေတ္တာရပ်ခံတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီကိစ္စမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတင် မဟုတ်ပဲ အခြားဘက်တွေမှာပါ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ အတွက် မေတ္တာရပ်ခံတာ။ ဒါကို မြန်မြန်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးဖို့။ မုန်းစကို တိုစေ ချစ်စကို ရှည်စေပေါ့။ အရင်က ရှိခဲ့တဲ့ သဟဇာတဖြစ်မှုကိုပဲ ကမ္ဘာကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့။ ဒီအမုန်းတရားတွေကို အမြန်ဆုံးပျောက်သွားအောင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မြန်မာ မွတ်စလင်မ် အဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုနေတာ။ ဒါပါပဲ။
Q – ဒါဆို အခု လက်စားချေ တုန့်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ဘာများ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါလဲ။
A – အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာကို ပြောမယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်သာသနာမှာ အကယ်၍ စစ်မက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူကို မသတ်ရဘူး။ အမျိုးသမီးတွေကို မသတ်ရဘူး။ ကလေးတွေကို မသတ်ရဘူး။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေကို မသတ်ရဘူး။ ရေတွင်းရေကန်တွေနဲ့ သစ်ပင်ပန်းမာန်တွေကို ဖျက်ဆီးမှု မပြုရဘူး။ စစ်ပွဲမှာတောင်မှ ဒါမျိုး စည်းကမ်းရှိတယ်။ ဒီလို အရပ်ဘက်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဥပမာ – လူတစ်ယောက်က သို့မဟုတ်ရင် လူတစ်စုရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို မကျေနပ်လို့ အဲဒီလူနဲ့ လူမျိုးတူတဲ့လူ၊ အဲ့ဒီလူနဲ့ ဘာသာတူတဲ့လူတွေကို ပစ်မှန်ထားပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အပြစ်ကျူးလွန်ရင် အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုပဲ အပြစ်ပေးရမယ်။ အပြစ်မရှိတဲ့သူကို လူမျိုးတူလို၊ ဘာသာတူလို့ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာကို လုံးဝ မလိုလားပါဘူး။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာေ၇းအဖွဲ့ကြီးမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သူ ဟာဂျီဦးမြင့်ထွန်းနဲ့ M-Media ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 05 May 2013 05:53 AM PDT
မေလ ၃၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတ
ဥက္ကံ ။ ။ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၃၀-ရက်နေ့က ဥက္ကံမြို့တွင် ဗလီ၊ အာရဗီစာသင်ကျောင်း၊ မွတ်စလင်မ်ဆိုင်ခန်းများ၊ အိမ်များ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ဥက္ကံမြို့ခံများထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
"အခြေအနေကတော့ နည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားပါပြီ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအခြေအနေအတွက် ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့ ပြန်လည်ထူထောင်မှုတော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ကူညီမှု တချို့တော့ လာတယ်။ မနေ့ကတော့ အိုလမာအဖွဲ့တွေကလာတယ်။ မီးရှို့ခံရလုိ့ ပြာဖြစ်သွားတဲ့ မွတ်စလင်မ်အိမ်တွေကို တာလပတ်(ပလပ်စတစ်မိုးကာ)တွေပေးသွားတယ်။
နောက်ထပ် တစ်ခြားတော့ ဘာမှ မထူးခြားသေးဘူး။ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ တချို့ လာရောက် ကူညီသွားတာပဲရှိတယ်။ ပုဂ္ဂလိကလာရောက် ကူညီတာမျိုးတော့ မရှိဘူး။ တစ်ခြားတော့ မလာဘူး။ တစ်ခြားအဖွဲ့တွေ နာမည်တွေတော့ ကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။ မနေ့က ကား ၄-၅-၆ စီးတော့ လာသွားတယ်။ တစ်ခြား တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ပြန်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ မြို့ပေါ်မှာလည်း တစ်ခြားတော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိပါဘူး။ နည်းနည်းတည်ငြိမ်နေပြီလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။"လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေးကွန်ရက် (PCN) ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရ ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် ကယ်ဆယ် အကူညီပေးရေးကိစ္စရပ်များကို ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်ရှိ ဥက္ကံမြို့ အနီးတဝိုက်ရှိ ရွာ ၃ရွာဖြစ်သည့် ပနီပင် ရွာတွင် အိမ်ခြေ (၆လုံး) လူဦးရေ ၂၀ကျော်၊ ချောင်းသဲရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၆လုံး) လူဦးရေ ၉၀၊ ကျွဲပုန်းရွာတွင် အိမ်ခြေ (၄၉လုံး) လူဦးရေ ၂၃၅ဦး မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရမှုများကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၃၄၅ဦး စားသောက် နေထိုင်ရေးများ အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ PCN နှင့် အတူ ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ကွန်ရက်မှ လိုက်ပါ ခဲ့ပြီး အကူညီပေးရေး ကိစ္စရပ်များကို တိုက်ကြီး BD သွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့၊ ဂျိုးဖြူ ပရဟိတ အဖွဲ့ နှင့် တိုက်ကြီး NLD အဖွဲ့ဝင်များမှ အပြည့်အဝ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍဝံသ (ဦးပြည်ကျော်) ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များကွန်ရက်
PCN မှနေ၍ လက်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် သောက်ရေသန့်၊ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အခင်း၊ အကာ တာပေါ်လင်၊ နို့မှုန့်၊ ကြာဇံခြောက်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ မုန့်ခြောက်၊ မုန့်စို၊ အချိုရည် အမျိုးမျိုး၊ အိုး၊ခွက်၊ ပန်းကန်များ၊ အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်၊ ကျားဝတ်၊ မဝတ်၊ ကလေးဝတ် အဝတ်အထည်များ အစရှိသည်တို့ကို လက်ရောက် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း၊ ကမ်းမြှောင်အုပ်စု၊ မီးလောင်စခန်းရွာတွင် လည်း အိမ်ခြေ ၁၀လုံးမီးရှို့ခံခဲ့ရပြီး၊ ၂၄လုံးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဂုံညင်းတန်း သကြားစက်တွင်လည်း အိမ်ခြေ (၇)လုံး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၉၆ဦး ဒုက္ခရောက်နေကြပြီး ၄င်းတို့အတွက် အရေးပေါ် လိုအပ်ချက်များမှာ- ရေ အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ အနီးရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းမှ ရေတွင်းရေကန်များပါ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသဖြင့်၊ PCN သည် တိုက်ကြီး BD သွေး အကူညီပေးရေး အဖွဲ့ အကူအညီဖြင့် ရေရရှိရေး အတွက် ရေတွင်းတုံကင် တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ရေရရှိ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်က အမျိုးသမီးနှင့် တိုက်မိခဲ့သည့် အလံတိုင်ကျောင်းမှ ကိုရင်လေးထံ လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံ စကားပြောကြားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ ကိုရင်လေးနှင့် ကျောင်းမှလည်း အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်မှုကို လိုလားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့၊ တိုက်မိသူနှင့်လည်း အဓိကပြသနာတက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါ ကိစ္စကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ လူစု၊ အကြမ်းဖက်၊ လုယက် မီးရှို့ခြင်းများကို ပြုလုပ်သူများက ကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည် ဟု လို့ PCN သတင်းထုတ်ပြချက်မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုးကား- PCN သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Posted: 05 May 2013 05:31 AM PDT
မေလ-၂၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတ
ကချင်ပြည်နယ် ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိုင်းတောင်တွင် ရှိသော မွတ်စလင်မ် အိမ်နှင့် ဆိုင်ခန်းများကို ယနေ့ညနေ ၅-နာရီခန့်က အကြမ်းဖက်သမားများမှ လာရောက် ဖျက်ဆီး သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မွတ်စလင်များ၏ အိမ်နှင့် ဆိုင်များ တွဲနေသည့် အိမ် ၃-အိမ်အတွင်း ၀င်ရောက်၍ ဆိုင်တွင်းရှိ ပစ္စည်းများကို ရိုက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဆိုင်ခန်းများ၊ အိမ်များအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ ပျက်ဆီးသွားခဲ့ရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်ခံရမှုကို ဆိုင်းတောင်မြို့ခံမှ မြစ်ကြီးနားသို့ ဆက်သွယ်၍ သတင်းပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဆိုင်းတောင်နှင့် ဖုန်းအဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့မှ သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။
ဤဆိုင်းတောင်ဗလီသည် ယမန်နှစ် ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဗလီများကို ဖျက်ဆီးစဉ်က စတင်ဖျက်ဆီးခံရသော ဗလီလည်းဖြစ်သည်။
ဆိုင်းတောင်တွင် မွတ်စလင်မ် အိမ်နှင့်ဆိုင်များ ဖျက်ဆီးခံရမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ဆိုင်းတောင် ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိုင်းတောင်တွင် ယနေ့ ညနေ(၄)နာရီခန့်က ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည့် မွတ်စလင်မ်အိမ်နှင့် ဆိုင်များဖျက်ဆီးခံရမှုအပေါ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအား ဖျက်ဆီးခံရသည့် ဆိုင်ရှင်တစ်ဦးမှ ဖြေကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ဟုတ်ကဲ့ ဖြစ်သွားပုံကို ကျွန်မပြောပြမယ်။ အရင်တုန်းက ဘာမှ ရန်ငြိုးရန်စလည်း မရှိဘူး။ ဗြုန်းတိုင်းကြီး ထဖြစ်လာတာ။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ဒီနေ့ နေ့လည်ပိုင်းလောက်မှာ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆိုင်မပိတ်ဘူးလား၊ ဆိုင်မပိတ်ဘူးလား၊ ဒီလို ဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက လူအုပ်စုနေတယ်၊ ဓါးတွေလည်း ၀ယ်နေတယ် လို့ လာလာပြောကြတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျမတို့လည်း ဘာမှ အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလေ။ ဘာမှလည်း ခေါင်းထဲမရှိဘူး။ ဘာမှ မဟုတ်ဘူးပဲ ထင်နေတာ။ ညနေ ၃-နာရီ ၄-နာရီလောက်ကျတော့ အစ်ကိုတစ်ယောက်က အပြင်ကပြန်လာပြီး ဆိုင်ပိတ်တော့ ပိတ်တော့ဆိုပြီး ပိတ်ခိုင်းတာ။ မြန်မြန်ပတ်လိုက်တာ ဆိုင်လည်းပိတ်ပြီး တံခါးလည်း ပိတ်လိုက်ရော လူ ၂၀-၃၀ လောက် တုတ်တွေ၊ ဓါးတွေ၊ ခဲတွေနဲ့ ရောက်လာတာ။ အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း အပြင်ထွက်ပြီး ဘေးအိမ်မှာ နေနေလိုက်တာ။ အစ်ကိုအစ်မတွေ ယောင်းမတွေကတော့ အိမ်အနောက်ပေါက်နေ ထွက်သွားလိုက်တာ။ တူမလေးကတော့ သွေးသားနုနုဆိုတော့ အိမ်ရှေ့အိမ်ကို ခဏပို့ထားလိုက်တာ။ သူ့ကိုတော့ ပြဿနာ စမဖြစ်ခင်လေးကပဲ ပို့လိုက်တာ။ သွေးလန့်သွားမှာစိုးလို့။ အဲဒါဆိုင်ပိတ်ပြီး ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ တံခါးတွေကို ခဲတွေနဲ့ပေါက်တယ်၊ တုတ်တွေနဲ့ရိုက်တယ်။ ကြေမွနေအောင်ပေါက်ပစ်လိုက်တာ။ အဲလိုလည်း မိနစ် ၂၀-လောက် အဲလိုလည်းလုပ်ပြီးရော သူတို့ ထွက်သွားကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျမလည်း ကျမတူမလေး သွေးတက်နေမှာစိုးလို့ အိမ်ရှေ့အိမ်သွားလိုက်တယ်။ သွားပြီး ရပ်စကားပြောနေတုန်းပဲရှိသေးတယ် နောက်ထပ် လူ ၅-ယောက်လောက် ဆိုင်ကယ် ၂-စီးနဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ တစ်ယောက်က ဓါးပါတယ်။ ဓါးရှည်ကြီးပါတယ်။ တုတ်တွေပါတယ်၊ နောက် ၂-ယောက်လောက်က ခဲတွေပါတယ်။ ပထမအဖွဲ့လုပ်သွားတုန်းက အိမ်တံခါး မပွင့်ဘူး၊ မှန်တွေပဲ ကွဲသွားတာ။ ပထမလူအုပ်က ၀ုန်းဝုန်း ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ မိနစ် ၂၀-လောက် လုပ်သွားကြတာ။
နောက် မိနစ် ၂၀-လောက်ကြာတဲ့အခါ နောက် ၅-ယောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ တံခါးကို အတင်းဆွဲဖွင့်တယ်၊ တံခါးတွေကို ဖျက်တယ်။ တံခါးကိုဖျက်ပြီးတော့ ပစ္စည်းတွေကို အကုန်ဆွဲထုတ်တယ်။ တစ်ယောက်က ဓါးနဲ့ လမ်းလျှောက်နေတယ် အရှေ့မှာ။ သူတို့က ပစ္စည်းတွေ အကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ နောက်ထပ် လူတွေ ရောက်ရောက်လာတယ် ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့။ ဘယ်သူမှန်း ဘယ်ဝါမှန်းတော့ မသိဘူး။ သူတို့တွေက ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လာလိုက် အင်ဂျင်ဝိုင်ပုလင်းတွေထုတ်လာလိုက် မ-သွားလိုက်၊ အမျိုးသမီး အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လာလိုက် မ-သွားလိုက်နဲ့။ အိမ်နဲ့ဝင်ပြီးမှ တကယ့် အနုကြမ်းစီးသလိုပဲ။ အဲလိုလုပ်နေတာ နာရီဝက်လောက်ကြာသွားတယ်။ ပစ္စည်းတော်တော်များများ ပါသွားတယ်။ ခဏနေတော့ ရဲကားရောက်လာတယ်။ ရဲက အဲဒီယူသွားတဲ့လူတွေကိုလိုက်တယ်။ ပစ္စည်းယူသွားတဲ့ ၂-ယောက်ကို ရဲက မိလိုက်တယ်၊ ကျန်တဲ့သူတွေက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ အဲဒီ ဖမ်းမိတဲ့ ၂-ယောက်က ဖျက်တဲ့ ၂-ယောက်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က လမ်းသွားရင်းနဲ့ သူများတွေ ပစ္စည်းယူနေတာတွေ့လို့ သူတို့က ၀င်လိုက်ယူတာ။ ကျန်တဲ့လူတွေက လူလည်တွေဆိုတော့ပြေးတာ။ မိသွားတဲ့ ၂-ယောက်က လုပ်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။
ရဲတွေက အချိန် ၁-နာရီခွဲလောက် အရှေ့မှာ ရပ်နေတယ်။ သူတို့က စစ်ချက်တွေယူတယ်။ ၁၀-မိနစ် ၁၅-မိနစ်လောက်နေတော့ ဘုန်းကြီးကား ၃-စီးလောက်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ရဲတွေ ၁၀-မိနစ်လောက် စကားပြောပြီးတော့မှ ဘုန်းကြီးတွေ ပြန်သွားတယ်။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျမတို့အိမ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ၃-အိမ်ပါ။ ကမ္ဘာကျော်ရယ်၊ မလိခရယ်၊ ၀င်းမေတ္တာရယ် အဲဒီ ၃-ဆိုင် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အိမ်နဲ့တွဲလျက်ရှိတာပါ။
လူအသေအပျောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာတော့ မရှိပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ သူတို့လုပ်လို့တော့ ဒဏ်ရာမရပါဘူး။ လူတွေက တတ်နိုင်သလောက်ပြေးလွှားရတော့ တစ်ခြားအရာတွေနဲ့ ထိခိုက်မိလို့ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရတာတော့ရှိတယ်။ သူတို့က လူကိုတွေ့ရင်တော့ လုပ်မယ့်အနေအထားရှိတယ်။ အခုက လူကို မတွေ့လို့လေ။ သတ်မယ် သတ်မယ်၊ ခေါင်းဖြတ်မယ်၊ သတ်မယ် ဆိုပြီး အော်နေကြတာလေ။ တံခါးတွေကို ရိုက်နေရင်းနဲ့ ရိုက် ရိုက် ရိုက် ဆိုပြီးအော်နေကြတာ။ ကျမတို့ကတော့ လွတ်အောင် ရှောင်လိုက်တာပါ။ လူရှိရင်တော့ သူတို့ လုပ်မှာပါ။
ဗလီကိုတော့မဖျက်ပါဘူး။ ဗလီကတော့ မနှစ်ကတည်းက ပါသွားပြီးသား။ ဗလီ မရှိတော့ဘူး။ အခုပြောတဲ့ ဗလီဆိုတာက ဂျမအသ်ခါနာ(၀တ်ပြုဆောင်)လည်းမက ဗလီလည်း မကျပါဘူး။ ဆိုင်းတောင်က လူတွေကတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက အဲဒါကို ဗလီလို့ခေါ်ကြတာပါ။
အခုဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသူတွေက ဘာပြောလဲဆိုတော့ သူတို့ တစ်ညလုံးစောင့်ပေးမယ်။ စိတ်မပူနဲ့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။ ရ.ယ.က ကို သူတို့ပြောနေသံကိုကြားတယ်။ ရဲမှူးက မှာနေတယ်။ ရယကကို ခင်ဗျားတို့ ကြက်ခြေနီတို့ ဘာတို့ရော ဒီတစ်ညတော့ မအိပ်နဲ့ ဒုက္ခခံပြီး စောင့်ပါလို့ မှာနေတယ်။ လူချထားလား မချထားလားတော့ ကျမလည်း ထွက်မကြည့်ရဲဘူး။ အခု ကျမလည်း အိမ်မှာ မအိပ်ရဲဘူး။ တစ်ခြားအိမ်မှာ အိပ်နေတာ။" ဆိုင်းတောင်မှ ဒေသခံမှ M-Media သို့ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခံရမှု အခြေအနေကို ပြောပြချက်ဖြစ်တယ်။
Posted: 05 May 2013 05:19 AM PDT
မေ-၄၊၂၀၁၃ M-Media ရေးသူ- ဇေယျာသူ
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က သူငယ်ချင်းတချို့နဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတော်တော် များများက ဆရာ၊ ဆရာမတွေလေ။ အစိုးရကျောင်းက ဆရာမ၊ ဆရာမတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ တချို့ကလည်း ပုဂ္ဂလိကကျောင်းမှာ၊ တချို့ကလည်း ကိုယ်ပိုင် ကျူရှင်လေးဖွင့်ထားတယ်၊ တချို့ကလည်း မူလတန်းကြိုက စပြီးသင်ကြားတာ၊ တချို့ကလည်း guide သဘောမျိုးပေါ့။
အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတစ်စုပြောရင်း စကားစပ်မိမိစပ်ရာရောက်သွားတာက အခု ၂၀၁၃-ခုနှစ် မတ်လနဲ့ ဧပြီလ အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေ ရောက်သွားတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေလည်း ဖြစ်နေတော့ သူတို့ကလေးတွေ (တပည့်လေးတွေပေါ့ ကျွန်မတို့တွေက စကားပြောရင် ငါ့ကလေး သူ့ကလေးလို့ပြောကြတယ်လေ)အကြောင်းရောက်သွားတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူစာသင်ပေးနေတာက မူလတန်းအရွယ်ကလေးတွေလေ။ အခုက နွေရာသီဖြစ်တော့ နွေရာသီစာသင်ဝိုင်းလေးဖွင့်ထားတာ။ တစ်နေ့ကျ ကလေးတွေ ကစားချိန်မှာ ကစားခွင့်ပေးတော့ ကလေးတွေက အချင်းချင်းကစားကြမယ်ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကစားနည်းတွေရွေးရင်း အများသဘောတူသွားတာက 'ဖိုက်တင်ပလေးတမ်းကစားမယ်၊ အဖွဲ့လိုက် ချကြမယ်၊ ကုလားနဲ့ဗမာ ချတမ်းကစားမယ်၊ ကုလားဘက်က သေကြ'တဲ့လေ။ အဲဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းလည်း ချက်ချင်းပဲ ကလေးတွေကို အဲလိုနည်းလမ်းမကစားရကြောင်းနဲ့၊ ကုလားနဲ့ဗမာ အဲလိုဖြစ်စရာမလိုပဲ အချင်းချင်းအတူတူ ညီညွတ်ကြဖို့ဆိုတာတွေကို ကလေးတွေ နားလည်အောင် ပြောပြရင်းတစ်ခြား ကစားနည်းကို ပြောင်းစေလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်မတို့ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ခံကိစ္စတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ သိစိတ်မှာရော မသိစိတ်မှာပါ စွဲထင်သွားခဲ့ပြီ။
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေဟာလည်း ကလေးတရားပွဲဆိုတာတွေမှာ အစ္စလာမ်အကြောင်း အလွဲအမှားတွေ၊ ပြီးတော့ မွတ်စလင်မ်တွေကို အထင်မြင်လွဲမှားစေတာတွေကို နားထောင်ရတယ်။ ဒီတော့ နုနယ်တဲ့ ကလေးအများစုရဲ့စိတ်မှာ အစ္စလာမ်ဆိုရင်၊ မွတ်စလင်မ်ဆိုရင် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ကုလား၊ ကုလားကို မုန်းတီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်နေပြီ။
မွတ်စလင်မ်ကလေးတွေအနေနဲ့ အခုလက်ရှိကာလမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားငယ်မှုတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ အနှိမ်ခံနေရတယ်။ ကလေးအချင်းချင်းမှာလည်း နင်တို့က ကုလားဆိုပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ လှောင်ပြောင် ပျက်ရယ်ပြုတာတွေ ခံနေရတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်မှာ အနည်းနဲ့အများ စိတ်ဒဏ်ရာရလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လာတယ်။ လူတစ်ယောက်၊ ကလေးတစ်ယောက်မှာ ဒီလိုမျိုးစိတ်အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာတာဟာ လုံးဝကောင်းတဲ့ အလားအလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါးသိကြသလို စိတ်ပညာရပ်နယ်ပယ်ကလူတွေ ပိုပြီး သိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် … ဘာမှ မသိနားမလည်သေးတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ဘ၀တွေကို ပန်းကောင်းအညွန့်ချိုးသလို မဖြစ်ကြစေလိုပါဘူး။
ဒုတိယတစ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု မကြာခင်ကာလမှာ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ကျော်လွန်လို့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့မယ့်ရာသီကို ရောက်တော့မယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျောင်းကိုသွားရတဲ့ မွတ်စလင်မ် ကလေးတွေကို ကျောင်းမှာ ကလေးအချင်းချင်း (State ကျောင်းက ကလေးဆိုတာ သူငယ်တန်းကနေ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိပေါ့) နှိမ်ချပြောဆိုတာမျိုး၊ လှောင်ပြောင်ပြက်ရယ်ပြုတာမျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ မရှိအောင် မိဘတွေကလည်း သွန်သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေကို နှိမ်ချတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဟိုးအရင် အဆက်ဆက်ကတည်းက ကျောင်းမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတချို့ကိုယ်တိုင် မွတ်စလင်မ်ကလေးတွေကို နှိမ်ချဆက်ဆံခံရတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့လည်း "ပဉ္စဂုဏံ အဟံ ၀န္တာမိ ၊ အာစရိယ ဂုဏံ အဟံ ၀န္တာမိ"ဆိုတာနဲ့ အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်သင့်တယ်လို့လည်း မြင်မိတယ်။
တတိယတချက်ကတော့ … အခု မကြာခင်ကာလမှာ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ရင် မြို့နယ်များစွာက အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲက ကလေးတွေ ဘယ်လို ကျောင်းပြန်တက်ကြမလဲ။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ရာမှာ ပြန်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီဆိုရင်တောင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ မိသားစုက ပြန်လည်ရပ်နိုင်ကြမလား။ မိသားစုက မရပ်တည်နိုင်လို့ အခြားကူညီတခြားဘာသာခြားကလေးတွေ လွယ်အိတ်ကိုယ်စီနဲ့ ကျောင်းသွားတာကို မွတ်စလင်မ်ကလေးတွေက အားငယ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့မျှော်ကြည့်နေကြမှာလား။ ထောက်ပံ့မှုရှိလာရင်ရော ကျောင်းတက်တဲ့အခါ အခြားကလေးတွေလို စိတ်အေးချမ်းသာနိုင်ပါ့မလား။ ကျောင်းမှာ ကလေးအချင်းချင်းရော၊ ဆရာဆရာမတွေ(အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ)ကရော ကလေးတွေကို စာနာ နားလည်နိုင်ကြပါ့မလားလို့တွေးရင်း ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ နာကျင်မှုများစွာ မေးခွန်းပေါင်းများစွာပါပဲ။
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုကြောင့်မှ ထပ်ပြီး ရိုက်မချိုးကြပါနဲ့တော့ ……………
Posted: 05 May 2013 04:39 AM PDT
မေ-၃၊၂၀၁၃ ဦးအောင်ထူး (ရှေ့နေ)
ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်သည် အမှန်တရားကို မဖေါ်ထုတ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအုတ်မြစ်ကို မချမှတ်။
စကထဲက လွဲခဲ့သော ကော်မရှင်
ကော်မရှင်က ထမ်းဆောင်ရမည့် အဓိကကျသော သုတေသနမေးခွန်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စကထဲက လွဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့စွဲဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တာဝန်ပေးစာတွင် "ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလနှင့် ဇွန်လအတွင်း၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်ပျက် ပြားစေသည့် လူစုလူဝေးဖြင့် ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်မှုများ၊ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် အမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် နှင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေး အကြံပြုရန်အတွက် အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ် များပါဝင်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် လိုက်ပါသည်။" ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၂) ရက်စွဲဖြင့် ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာထွက်လာပြီးနောက် ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးမြင့် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ဥယျောဇဉ်တွင် ပထမဆုံးစာကြောင်း၌ "ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ၏ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများ နှင့် အနာဂါတ်တွင် ထို ပဋိပက္ခမျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရေး ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။" ဟူ၍ ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
သမ္မတ၏ တာဝန်ပေးစာ ပထမပိုင်းကို ချုပ်ပြီးကြည့်လျှင် "ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး နှင့် ဥပဒေ စိုးမိုး ရေးကို ထိခိုက် ပျက်ပြားစေသည့် လူစုလူဝေးဖြင့် ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်မှုများ၊ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ် ပွားမှုများ နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် အမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်" ဟူ၍တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကော်မရှင် ဥက္ကဌ၏ စာ ပထမ ပိုင်းအရမူ "ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်" ဟူ၍ တာဝန်ကို ခံယူထားကြောင်း နားလည်နိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ သုတေသန လုပ်ငန်း သဘောအရ စူးစိုက်လေ့လာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည့် အကြောင်းရပ်တွင် ကော်မရှင်သည် စကထဲက လွဲနေကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခ ကို မလေ့လာရဟု ဆိုလိုရင်း မဟုတ်ပါ။ ယင်း မှာနောက်ခံ အကြောင်းရပ်ဖြစ်သည်။ ဆက်စပ်လေ့လာ ဖေါ်ထုတ်ဘို့လိုပါမည်။ သို့ရာတွင် သမ္မတ၏တာဝန်ပေးစာအရမူ စူးစိုက် လေ့လာရမည့် သုတေသန မေးခွန်း၏ အချိန်ကာလ အ၀န်းအ၀ိုင်းဖြစ်သည့်၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလနှင့် ဇွန်လ အတွင်း၌ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားသည့် လတ်တလောအကြောင်းရပ် ကို အဓိကလေ့လာရပါမည်။
လတ်တလောအကြောင်းရပ်များကို အဓိကထား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း မပြုခဲ့သည့် ကော်မရှင်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေ နှင့် ဇွန်လများ အတွင်း ဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ထိခိုက်ပျက် ပြားကာ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် လတ်တလော အကြောင်းမှာ နှစ်ရပ်မှာ ကျောက်နီမော် လူသတ်မှု နှင့် တောင်ကုတ်လူသတ်မှုတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့သည် ပြင်းထန်လှသည့် အဓိကရုဏ်းကြီးအား ဖေါက်ခွဲခဲ့သည့် စနက်တန်များ သဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤစနက်တန်များကို ဖြုတ်သူများ ကိုယ်တိုင်သည်သာ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများဖြစ်သလား။ သို့မဟုတ် စနက်တန်ဖြုတ် သူများအား နောက်ကွယ်က အင်အားစုတစုံတရာက စနစ် တကျ စီစဉ် အမိန့်ပေးညွှန်ကြားမှု ရှိသလား။ ကော်မရှင် သည် လတ်တလော အကြောင်းအား တိတိကျကျ လေ့လာ စုံစမ်း စစ်ဆေးကာ အမှန်တရားကို ဖေါ်ထုတ်ရန် တာဝန်ရှိ သည်။ ကော်မရှင်သည် ယင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိသဖြင့် အမှန်တရားကို မဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ၌ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားရသည့် နောက်ခံအကြောင်းကို စာမျက်နှာ (၁၂) မျက်နှာ တင်ပြခဲ့ သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ပို၍ အရေးတကြီးထားကာ အဓိကလေ့လာရမည့် လတ်တလောအကြောင်းကို အနည်းဆုံး နှစ်ဆ၊ (၂၄) မျက်နှာခန့် တင်ပြ သင့်သည်။ သို့ရာတွင် စကထဲက လွဲခဲ့သောကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာရှည်ကြီးတွင် ကျမ်းကိုးများ၊ နောက်ဆက်တွဲများပါ ထည့် သွင်းတွက်ချက်ပါက စုစုပေါင်း ၁၈၅ မျက်နှာရှိသော်လည်း လတ်တလော အကြောင် ၏ ကြောရိုး ပြစ်မှုကြီး နှစ်ရပ် နှင့် စပ်လျှဉ်း၍မူ စာတမျက်နှာခန့်သာ ဖေါ်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ပထမ ပြစ်မှုကြီး အတွက်မူ စာကြောင်း တကြောင်းမျှသာ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အခြေခံအကျဆုံးအနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား အပြစ်ပေးနိုင်ရေးကိုပင် ထိထိရောက်ရောက် မဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကော်မရှင်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား အရေးယူရန် အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားမှု မရှိသည့်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားက ထောက်ပြသောအခါ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင် က ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ (၃) ရက်နေ့နံက် ဘီဘီစီ နှင့်အင်တာဗျူးတွင် " ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကို သက်သေ သက္ကာယ နဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြနိုင်တာက အားနည်းတယ်။ သက်သေ သက္ကာယ အရ ဒီမှာ ဒါဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာရှိခဲ့ရင် အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြားလောက်ဘဲ အမြင်လောက်ဘဲ ပြောပြီးတော့ Circumstantial Evidence မရှိတာတွေ ပြောလာရင် ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနိုင်တာက ဥပဒေနဲ့ အညီ လုပ်ဘို့ အသေအချာ ဂရုပြုရမယ် ဆိုတဲ့အဆင့်လောက်ပါဘဲ။" ဟူ၍ ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဥပဒေ နှင့်အညီလုပ်ဘို့ အသေအချာ ဂရုပြုရမယ်ဟုပြောခဲ့သော ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုးကြီး ကိုယ်တိုင်က ပြည် တွင်းတွင် ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော သက်သေခံ ဥပဒေကို မသိသောအခါ ပြသနာ တက်လာသည်။ သက်သေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ (၅၉) အရ "စာတမ်း အမှတ်အသားများ၏ အနှစ်သာရများမှလွဲ၍ အချက်အလက်များအားလုံးကို နှုတ်သက်သေခံ ချက်ဖြင့် သက်သေပြရမည်။" ဟု လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ (၆၀) အရု"နှုတ်သက်သေခံချက် သည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ ရမည်။" ဟု လည်းကောင်း ပြဌာန်းထားသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းများတွင် တဆင့်ကြား မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ကြား၊ ကိုယ်တိုင်မြင်သူများ၏ သက်သေခံချက်ကို Circumstantial Evidence ဟုခေါ်သော ပတ်ဝန်းကျင်သက်သေခံချက် ထက် ပိုမို တန်ဘိုးထား၍ တရားရုံးများက လက်ခံကြရသည်။ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှုးကြီးသည် အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းပြန်ပြောနေပါသနည်း။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းများတွင် မည်သည့်သက်သေခံချက်ကို မည်သို့ မည်ပုံ လက်ခံ သုံးသပ်ရမည်ဟုပင် နားမလည်ပါက ကော်မရှင်သည် အမှန်တရားပေါ်အောင် မည်သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးပါမည်နည်း။
အစိုးရအာဏာပိုင်များ ပါဝင်ပတ်သက် ကျူးလွန်မှုရှိမရှိ၊ လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ နှင့် မစ္စတာ ကင်တားနားတို့ပြောတာ မမှန်ဘူးလား ဟူသောမေးခွန်းကို ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှုး က " ဒီလိုမျိုး အကြောင်းအရာ တွေကို စစ်ဆေးဘို့ဆိုရင် အခုရတဲ့ အချိန်လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူး။ အကြာကြီး ပြန်လုပ်ရမှာ။" ဟု ဖြေ ခဲ့သည်။
စင်စစ်အားဖြင့်မူ အချိန်သည်လိုသည်ထက်ပင်ပိုပါသေးသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ(၁၈) ရက်နေ့တွင် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မရှင်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ၂၁ ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းအချိန် ရှစ်လ နှင့် သုံးရက် ရခဲ့ သည်။ အဓိကရုဏ်းကြီးအား ဖေါက်ခွဲခဲ့သည့် စနက်တန်များ သဘွယ် အရေးကြီးလှသည့် ပြစ်မှုကြီး နှစ်ခုအား အဓိက ထား၍စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်မှု မပြုခဲ့ဘဲ သမိုင်းကြောင်းများအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အကျိုး သက် ရောက်မှုများ အပေါ်တွင်လည်းကောင်း လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုအချိန်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ အချိန်ပြသနာပေါ်ခဲ့ရသည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ ၀င်ရိုးဖြစ်သော တရားစီရင်ရေးနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ လေ့လာစုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ခြင်း မပြုခဲ့သဖြင့် အမှန်တရားကို ပျောက်ဆုံးစေ ခဲ့သည့် ကော်မရှင်။
ပထမ အမှုတွင် ရခိုင်အမျိုး သမီးကလေးအား မုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်၍ ပြစ်မှုကျူး လွန်ကြောင်း စွပ်စွဲခံရသူသုံးဦးအနက် တဦးမှာ အချုပ်ခန်းထဲ တွင် ကြိုးဆွဲချသေသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မှုခင်းတွင် နောက်ကွယ် က ကြိုးကိုင်စီစဉ်သူများ အား မဖေါ်ထုတ်နိုင်စေရန် နှုတ်ပိတ်လိုက်ခြင်းများဖြစ်သလား။ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ခွင့်ရပါ လျှက် ကော်မရှင်သည် မည်သို့ မျှ မဆောင်ရွက်ခဲ့။ ရခိုင်အမျိုး သမီးကလေးအား မုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်သူ မည်သူ့ကို မဆိုအရေးယူအပြစ် ပေးရပါမည်။ သို့ရာတွင်တရားခံ များဘက်တွင် ခုခံထုခြေခွင့် အပြည့်အ၀ရှိဘို့လိုသည်။ ဤမျှ ကြီးမားလှသော လူ သတ်မှုကြီးအား အလွန်တိုတောင်း လှသည့် ရက်သတ္တသုံးပတ်မျှ အတွင်း ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီး ကျန်တရားခံ နှစ်ဦးအပေါ် သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေး သမိုင်းတွင် မကြားမိဘူးခဲ့။ ကျန်သူနှစ်ဦးကိုပါ ထပ်မံ နုတ်ပိတ်လို၍လား သံသယဖြစ်ဖွယ်ပင်။
ဒုတိယ အမှုတွင် လူ (၁၀) ဦးအား ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တပြိုင်နက် သတ်ဖြတ်ပစ်သည်အထိ ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြသူ များ သည် မည်သူတို့နည်း။ ဤမျှကြီးမားလှသော ပြစ်မှုကြီးကို နောက်ကွယ်မှနေ၍ ကြိုးကိုင်စီစဉ်၊ သို့မဟုတ် ဖုံးအုပ်ကာ ကွယ်ပေးထားသော အဖွဲ့အစည်းများရှိလျှင် မည်သည်တို့နည်း။ တိတိကျကျဖေါ်ထုတ်ရန် ကော်မရှင်တွင် တာဝန်ရှိ သည်။ မဖေါ်ထုတ်ခဲ့။ အပြစ်ပေး အရေးယူရန် မတောင်းဆိုခဲ့။ တရားစီရင်ရေးပိုင်းအရ အားနည်းချက်တွေ ရှိသည် ဆိုလျှင်လည်း လွတ်လပ်၊ ဘက်မလိုက်၊ အားကောင်း ထက်မြက်သော တရားစီရင်ရေး စနစ်ပေါ်ပေါက် လာရေး အတွက် မည်သည့် အဆိုပြုမှုမျှ မတင်သွင်းခဲ့။ ကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်က ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ မရှိမဖြစ် အရေးပါလှ သည့် အခြေခံများကို ဥပက္ခာပြုထားသောအခါ နောက်ထပ် အလားတူပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်မှု မရှိစေရန် မည်သို့ ကာကွယ် တားဆီးမည်နည်း။
အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖေါ်ထုတ်တင်ပြမှုမပြုခဲ့သည့် ကော်မရှင်။
မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို အစိုးရတိုင်း၏ အခြေခံအကျဆုံးတာဝန်သည် ပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ် စောင့် ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရပေါ်လွင်သည်မှာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များအတွင်း တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး ကိုင်တွယ်သူမှာ အဓိကအားဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ မဟုတ်၊ နေပြည်တော်မှ ဗဟိုအစိုးရဖြစ်သည်။ကော်မရှင် ၏အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၇ တွင် "နစက သည် ကက (ကြည်း) ၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အမိန့်ကိုသာနာခံရပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်သူများ၏ အမိန့်ကို နာခံနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း" အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ဤတွင် ကော်မရှင်သည် ကောင်းမွန်သောလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မှု ကို ကျင့်သုံးသည့် နိုင်ငံတကာ အစဉ်အလာ အရ အမိန့်ပေး ခြင်းအရတာဝန်ရှိမှု ကို ဖေါ်ထုတ်ရပါမည်။
မျက်စိရှေ့မှောက်တွင် ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း တွေ့ရ ပါလျှက် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် ချက်ခြင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပြုဘဲ ရပ် ကြည့်နေ ခဲ့ကြသည်ကို ရခိုင်ပဋိပက္ခများ အတွင်း စတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တပြည်လုံးသို့ပြန့်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ထိပ်ဆုံးတွင် တိုင်း ပြည်အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားသော အမျိုးသားကာကွယ် ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ နှင့် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင် သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသည်။ ကော်မရှင် က ရခိုင်ပဋိပက္ခများ အတွင်း အမိန့်ပေးခြင်းအရ တာဝန် ရှိမှုကို စနစ်တကျတိတိကျကျ မဖေါ်ထုတ်ခဲ့ခြင်း အားဖြင့် ကာလုံ နှင့် နေပြည်တော် အစိုးရကို အကာ အကွယ် ပေး ရာရောက်သည်။ တပြည်လုံးတွင် ပြစ်မှုကြီးများ တောက်လျှောက် ဖြစ်ပွား ကျူး လွန်နေရာ၌ ကာလုံနှင့် နေပြည်တော် အစိုးရ၏တာဝန်ရှိမှုကို ဆက်လက်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည့် အုတ်မြစ်အားကော်မရှင် က ချပေးလိုက်ရာရောက်သည်။
ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာတွင် လေ့လာအသုံးချသင့်သော အကြောင်းအရာများလည်းပါရှိသည်။ သို့ရာတွင် စာမျက်နှာ ၂၂ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းများ ဟူသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် သုံးသပ်ချက် အများစုကြီးမှာ ထင်မြင်ချက် များကို စုစည်းဖေါ်ပြချက်များ ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ တိတိကျကျ အဖြေရှာမှု မတွေ့ရ။ မည်သည့် အမှန်တရားကိုမျှ ပြတ်သားစွာ ဖေါ်ထုတ်ပြမထားပါ။
ကော်မရှင်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အရေးပါလှသည့်အခြေခံများကို မထောက်ပြ၊ အစိုးရ၏ အမိန့်ပေးခြင်းအရ တာဝန် ရှိမှုကို မဖေါ်ထုတ်၊ လွတ်လပ် ဘက်မလိုက် အားကောင်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လေးစားလိုက်နာ သည့် တိုင်းပြည်လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်း များ အဖြစ် အသွင် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းရေးကို တွန်းအားမပေး၊ ပြစ်မှုကြီးများ ဖြစ်ပွားသည့်အခါတိုင်း မျှတသော တရားစီရင်စစ်ဆေးမှု အခြေခံ တွင် တရားရုံးများအား အားကိုးဖြေရှင်းနိုင်ကြစေ ရေး မီးမောင်းထိုးမပြခဲ့။ ယင်းတို့အစား တာဝန်ခံမှု မရှိသော ကာလုံ၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တလက်ကိုင် လုံခြုံရေး အဖွဲ့ အစည်းများအား အင်အားနှစ်ဆတိုးကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ထပ်မံချထားရန်ကိုသာ အဓိကအားဖြင့် တွန်းအားပေးလျှက်ရှိသဖြင့် ရေရှည်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သာမက ပြည်ထောင်စု တ၀ှမ်းလုံးမှာပင် သေနတ်ကို ဒူး ထောက်ရှစ်ခိုး၊ သေနတ်အောက်တွင်ပင် အသက်ရှင်ခိုလှုံရမည့် ဘ၀သို့ လူထုကြီး တရပ် လုံးကျဆင်းစေအောင် ပြု လုပ်လိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
တယ်လီဖုံး၊ (၄၆) (၀) ၇၆ ၁၁၅၆ ၂၁၅
ရက်စွဲ၊ မေလ (၃) ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
 ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၁၃၊ ၁၄
 State institutions for security
Posted: 05 May 2013 04:18 AM PDT
မေ-၄၊ ၂၀၁၃ M-Media ထွန်းတောက်
ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်ရေး ကွန်ရက်နှင့် ရွှေဝါရောင်သံဃာကွန်ရက်မှ သွားရောက်လှူဒါန်းစဉ်
ပနီပင် ။ ။ပနီပင်ရွာရှိ အကြမ်းဖက်ခံရသော မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်များအတွက် အလှူရှင်များ ပေးလှူထားသော ပစ္စည်းများကို အကြမ်းဖက်သမားများက ပြန်လည်လုယက်ရန် လုပ်ဆောင်မှုများ ရှိနေကြောင်းသိရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပနီပင်မှ ဒေသခံတစ်ဦးမှ ပြောပြရာတွင် -
"အလှူရှင်တွေ လာလှူသွားတာတွေကို မနေ့ညကတုန်းက ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ပနီပင်မှာ လာလုတယ်။ ကျွဲကုန်းကလူတွေ လာလုတာပါ။ ဒီကျွဲကုန်းက မွတ်စလင်မ်တွေနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မွတ်စလင်မ်တွေနေတာက ကျွဲကုန်းလေးပါ။ ခြောက်တဲမှာက (၁၆)အိမ်၊ ကျွဲကုန်းလေးမှာက (၄၅)အိမ်၊ ကျွန်တော်တို့ ပနီပင်မှာ ၆-အိမ်က မီးရှို့ခံရပြီး ၆-အိမ်က ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာ။ စုစုပေါင်း(၁၂)အိမ်ပါ။
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လာလုတာလဲဆိုတော့ မနေ့က ညမိုးချုပ် ၈-နာရီလောက်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ လူ ၁၀၀-၀န်းကျင်လောက်ရှိတယ် ချီတက်လာပြီး သူတို့က ၀ိုင်းပြီးလုကြတာ။ အကြမ်းဖက်ခံလိုက်ရတဲ့အိမ်တွေက အိမ်မရှိတော့ဘူးလေ။ သူတို့က လမ်းဘေးမှာ တဲကုပ်လေးတွေနဲ့ နေနေရတာ။ အဲဒါကို အကြမ်းဖက်တွေက အတင်းဝင်ပြီးတော့မှ အနုကြမ်းစီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာ ရဲတွေတော့ရှိတယ်။ ရဲတွေက သေနတ်တော့ဖောက်တယ်။ တစ်ခြားတော့ မလုပ်ဘူး။ လာလုတဲ့သူတွေ ပစ္စည်းတွေလုနေတုန်းမှာပဲ ရဲက သေနတ် ၄-၅-၆ ချက် ဆင့်ဖောက်လိုက်တယ်။ အဲလိုဖောက်လိုက်တော့မှ လူတွေ ပြန်ရှဲသွားပြီး ပစ္စည်းတွေတော့ မပါသွားဘူး။ လူတွေကိုတော့ မပစ်ပါဘူး။ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တာပါ။ ရဲအစောင့်ချထားတယ်ဆိုတာလည်း လာပြီးတော့မှ ထိုင်စောင့်နေတာပဲရှိတယ်ဗျ။ တကယ့်တကယ်တမ်းမှာ သူတို့လည်း ဘာမှ အကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူးဗျာ။
အလှူရှင်တွေ လာပေးကြတာက အင်္ကျီအ၀တ်အစား၊ ဆန်၊ တစ်ခြားအစားအစာနဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ ပေးပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့တွေလာတယ်။ နောက်ပြီး NLD အဖွဲ့ဆိုလား လာတယ်။ သူတို့ပြောတော့ပြောတယ် ကျွန်တော် မပြောတတ်ဘူး။ သူတို့ကတော့ NLD လို့တော့ပြောတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သတင်းကြားနေရတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပနီပင်ရွာက ပြန်ခုခံတော့ သူတို့ လုပ်ချင်သလို မလုပ်လိုက်ရဘူးလေ။ အဲဒီ အပေါ်မှာ သူတို့ မကျေနပ်ဘူး။ အခုက ကင်းချထားတော့ သူတို့ငြိမ်နေတယ်။ ဒီကင်းတွေထွက်သွားရင် သူတို့ပြန်လုပ်မယ်လို့ နည်းနည်းပါးပါး အသံတွေ ကြားနေရတယ်ဗျ။ ထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။" လို့ M-Media ကို ဆက်သွယ်ပြောပြလာပါတယ်။
ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က ဥက္ကံမြို့တွင် ကိုရင်ငယ်တပါးကို မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတဦး တိုက်မိရာမှ အကြောင်းရှာပြီး ဥက္ကံမြို့ပေါ်ရှိ ဗလီ၊ မွတ်စလင်မ်များ၏ နေအိမ်များနှင့် ဆိုင်ခန်းများ၊ ဥက္ကံမြို့ အနီးတဝိုက်ရှိ ရွာ(၄) ရွာမှ မွတ်စလင်မ် အိမ်ခြေများကို အကြမ်းဖက်သမားများမှ မီးရှို့ဖျက်ဆီး လုယက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် လူ ၈ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။
Posted: 05 May 2013 04:08 AM PDT
4. ရခိုင်ပဋိပက္ခ မကျယ်ပြန့်ခင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ "မွတ်စလင်ကုလား" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ အစိုးရသတင်းစဉ် အနေနဲ့ "မွတ်စလင်ကုလား" ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အထက်လူကြီးရဲ့ အမိန့်မရဘဲ ထည့်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူက အမိန့်ပေး စေခိုင်းသလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာလည်း မရှိသေးပါဘူး။
အစိုးရက အရေးမယူခဲ့ဘူးဆိုရင် တရားမျှတမှုကို လိုလားသူတွေက နိုင်ငံတကာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားမှာ ဖြစ်သလို International Criminal Court (ICC)၊ အခြားသော UN အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုင်ကြားပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွေ အနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုသူရဲ့ IP၊ မေးလ်လိပ်စာတွေကို တောင်းဖို့ ၀န်လေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူထုမောင်ကာဠုသိဖို့ လိုပါတယ်။
Posted: 05 May 2013 10:17 AM PDT
1.10 amULASAN GB - sekalipun BN masih memerintah Malaysia, namun PR berjaya menunjukkan prestasi yang hebat.
Posted: 05 May 2013 03:53 AM PDT
Updated5May 2013, 19:24 AEST
Polls have closed in Malaysia amid concerns that electoral fraud could influence the outcome of today's election.
Millions of Malaysians
have voted in the most closely-fought election in their country's
Don't worry about the FOREIGNER Burmese Muslim professionals like me who is in your country for 27 yrs. .
Now there are more than enough evidences of Persecution, Prosecution, Religious Cleansing of Muslims of Myanmar, burning of hundred of Masids and Qur'ans but you Malaysians keep quiet? You just wish to help Orang Puteh (=European) Bosnian Muslims? And your cousin Acheh Muslims, Southern Thai, Southern Filipinos and Indonesians only.
I hope Allah would surely ask this question on the judgement day to all the Muslim leaders who ignore the PLIGHTS of fellow Muslims and collaborate with enemies of ISLAM. Just shout loudly against Israel and supporting Palestine to get the grassroots Muslims' vote only enough for those hypocrite Muslim leaders around the world.
My comment under RACIST Malaysian Insider's bigot article, "
Watchdogs on foreigners' 'fishy behaviour' in GE13, says PAS
Posted: 05 May 2013 12:21 AM PDT
တနေ့ အားလုံး သေရမှာခြင်း အတူတူ .. ဘာလို့များ တစ်နိုင်ငံတည်းသားခြင်း သတ်ဖြတ်တာတွေ အားပေး လုပ်ကိုင်နေကြတာလဲဆိုတာ စဉ်းစား မရဘူး။ နိုင်ငံမတူရင်တောင် …. ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဘာသာရေး နာမည်ခံပြီး မုန်းနေကြတာ အင်မတန် စိတ်ညစ်စရာပါပဲ။ မေတ္တာ တရား ကြီးမားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီပီသသ နေထိုက်ကြပါလို့ ပြောတာကို နာတယ် ထင်နေကြတယ်။
အခုတော့ .. အေးချမ်းပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သွေးချောင်းစီးမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေထဲ တိုးဝင်နေပြီ။ အေးအေးချမ်းချမ်း အတူတူ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေကြပါလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာကို နားမလည်ဘဲ …. ရိုင်းစိုင်း တုန့်ပြန်ခဲ့ကြတာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ အမေရိကန်တို့ရဲ့ ပြဿနာကို အလကားနေရင်း မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ဇာတ်စုံခင်းပြီးကဖို့ … ဈေးဝယ်ထွက်နေကြသလိုပဲ။ ကြားက အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်တွေနဲ့ ဘဝတွေ၊ မလုံခြုံတော့ဘူး။ အဲဒီထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးရဲ့ မိသားစုတွေ ပါနေတယ် ဆိုတာ မေ့နေကြလား မသိဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ တခါမှ မကြားဖူးတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် … ၁၈ ရာစုက လက်နက်ဖြစ်တဲ့ တုတ်ဓါးလောက်သာ ရှိပြီး … လူအုပ်နဲ့သာ အနိုင်ကျင့်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိသူတွေ … တကယ့် အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲ။ တကယ် ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် … ၁၉ ရာစုက သေနတ်တွေနဲ့ လက်နက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ပြည်သူ့ရဲ ဆိုတာကို ဘယ်လို အားကိုးမလဲ။
အဲဒီ အကြမ်းဖက်ခံရနိုင်မှုထဲမှာ အကုန်လုံးရဲ့ မိသားစု ဘဝတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနာဂတ် ဘဝတွေ ရင်းထားရတယ်ဆိုတာ သတိထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အမုန်းတွေက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တာ မဟုတ်ဘဲ … နှစ်ရာ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ … ခင်ဗျားတို့ မသိပေမယ့် သိတဲ့ လူတွေက ပြောတာကို နားထောင်လိုစိတ် မရှိကြဘူး။ မုန်းဖို့လောက်ပဲ တွေးနေကြတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲ … လူမျိုး ဘာသာ မတူသူ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် ယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး … တစ်နိုင်ငံသားလုံးရဲ့ အေးချမ်းတဲ့အနာဂတ်တွေကို တည်ဆောက်ဖို့ …. ဒီနေ့က စပြီး ပြင်ဆင်ကြမယ်ဆို နောက်မကျသေးပါဘူး။
အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ ဒီလမ်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ … မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မလုံခြုံမှု ကြောက်ရွံ့နေရမှုကို တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် အနေအထားဖြစ်လာနေပြီ။
ဘယ်လမ်းကို ရွေးကြမလဲ … မျိုးချစ် … သာသနာချစ် အပေါင်းတို့။
Posted: 05 May 2013 02:03 AM PDT
Posted: 04 May 2013 11:39 PM PDT
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ ပြည်ပက မခံမရပ်နိုင်တဲ့သူတွေက ပြောယုံရှိသေးတာပါ။ ဒီနေ့ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေမှာ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တွေကို အကြမ်းဖက် မီးရှို့ လုယက် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ လက်တစ်ဆုပ်စာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမည်ခံ အကြမ်းဖက်သမား တစ်ချို့ကြောင့် အေးချမ်းလှတဲ့ ညီနောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ သွားတဲ့တိုင်းပြည်တိုင်းမှာ မျက်နှာပျက်ရပါတယ်။ မေတ္တာတရားကြီးမားလှတဲ့ ကိုယ်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ သင်ကြားထားတဲ့ တရားတော်တွေကို အထင်လွဲနေကြပါတယ်။ အဲ ဦးရဲထွတ်တို့ ဘယ်တုန်းကမျှ လိုလားခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ "ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နားလည်မှုတည်ဆောက် ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ၊သဟဇာတဖြစ်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ" ဆိုတာကြီးကတော့ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စားကြီးပါဗျာ ဆိုရင် ငြင်းရဲသလားခင်ဗျာ။
Posted: 04 May 2013 11:38 PM PDT
On the eve of polling for the 13th general election, the opposition strewed lies that former PM Tun Dr Mahathir and family fled the country, leaving son Mukhriz to lose in Kedah.
For whatever the reasons and motive are, Pakatan was running out of issue to woo voters, and the pressure was more on them than on Barisan Nasional.
Pakatan is intoa'do or die' battle to make Anwar Ibrahim as the next prime minister.
It is for that very reason which prompted them to shuffle the game cards inaway that saw PKR, PAS and DAP got locked in solving issues pertaining to seats allocation and who should get more ministerial posts after forming the Cabinet.
They actually worked out the GE for Anwar and not for other objectives set under their manifesto. Its not about the impossibles like bringing down the price of cars, repealing PTPTN or applyingabig brake on highway toll.
They themselves agree with the fact that suchadeal offer to Malayians will not dodge voters who began to realise its negative impact on the country and the rakyat.
And the fact that the three parties use their own logo instead of Pakatan reflects how disunited they are, hence raising doubts about their ability to administer the country if they take over Putrajaya.
Yes, they pose BN with the stiffest challenge ever but the 13 million voters - after being fed with too much lies and empty promises - are well aware of the rickety future should Pakatan is given the mandate.
What happened in all Pakatan states namely Kelantan, Kedah, Penang and Selangor wasamanifestation of their inability to rule. The infighting among the three and within the individual party wasabad testimony ofaloosened cooperation among them.
We dont need people with no experience to manage the country.
Record of achievement and the success story should become voters' reference before going to the poll.